Asụsụ - AfricaArXiv
Ihe dị ka asụsụ 2000 a na-asụ n'Africa. Senegal, Nigeria na Kenya na-etinye ego maka ịkwalite na ịkwalite asụsụ obodo. Ndi okacha mara na sayensi n’Afrika enweghi ike ikpata ozi gbasara. Anyi chere na otutu ndi mmadu nwere ike choro ikerita ihe omuma ma oburu na ha nwere ohere ime ya n'asusu ha.
Nchịkọta na Bekee na French
Biko nye nkenke nkenke na French / Bekee tinyere isi ya iji mee ka oghere dị n'agbata francophone na anglophone Africa.
Enwere ike iji ntụgharị rụọ ya site na iji ya ntụgharị google or DeepL - na na ikpe biko tinye ihe edeturu, dị ka “Atụgharịrị onwe ya na [Google Translate / DeepL]”.
Enwere ike iji AfricaArxiv mee ihe maka njikwa oru n'asụsụ mpaghara (ya na azịza anakọtara) maka ịdebanye ihe odide ahụ na ngalaba ntụnye ọkachamara pụrụ iche na Bekee.
Anyị na-akwado ntinye akwụkwọ n'asụsụ ndị obodo sayensi na-ejikarị na obodo dị ka Bekee, French, Swahili, Zulu, Afrikaans, Igbo, Akan, ma ọ bụ asụsụ ala ndị ọzọ nke Africa. A ga-edobe ihe odide ndị edere n'asụsụ ndị na-abụghị Bekee n'usoro ọkwa ruo mgbe anyị ga-enyocha ya. Anyị ji otu a gbaa gị ume ka ị tụọ ndị nwere ike inye aka n'ịhazi asụsụ gị.
Ntughari ihe odide
Tupu ịmalite ịkpọtụrụ ndị edemede nke edemede mbụ maka nkwenye tupu ha na nke ha.
Isi aha kwesiri ịbụ utu aha atụgharịrị; na-egosi na nke a bụ ntụgharị nke ihe odide dị adị (ịmaatụ [SW> EN] nke isiokwu ya sụgharịrị gafere site na Swahili gaa Bekee). Tinye aha asụsụ izizi dị ka sobtaitel iji mee ka achọpụta ntụgharị asụsụ ahụ. Otu njikọ na akwụkwọ asụsụ izizi nwere nkwupụta doro anya nke ntụgharị ga-esonye na ibe mbụ.
Tinye metadata ọzọ dị mkpa.
You hụrụ na ị nwere ike ịgbanwe asụsụ websaịtị anyị gaa Hausa, Swahili, Xhosa ma ọ bụ Amaranth n'etiti asụsụ ndị ọzọ a na-asụ na kọntinenti ahụ?
Site na ntughari webusaiti nke AfricaArXiv sitere n'aka nke GTranslate.io site na WP ngwa mgbakwunye Bekee gaa n'asụsụ iri na itolu. Nsụgharị ahụ dị mma mana ezughị oke nke kpatara…. Anyị na-achọ ndị ọrụ afọ ofufo iji nyere anyị aka ịsụgharị akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a sụgharịrị na weebụsaịtị anyị. Iji sonye na mbọ obodo a biko zitere email onyinye@africarxiv.org.
Ugbu a, anyị na-enye ọdịnaya anyị n'asụsụ ndị a:
Send anyị ihe email iji nyere aka sụgharịa nkwupụta ọ bụla edepụtara n'okpuru na atụmatụ dị mkpa maka iche na ntinye ya na Mmụta dị elu, nyocha na mbipụta agụmakwụkwọ:
. Chee Tulee Nyefee
. Ntinye Helsinki